Baarlamaanka Soomaaliya Oo Go,aan Gaar Ah Ka Gaadhay Dhaqaalaha Miisaaniyada Ugu Jira Ciidamad | Saxil News Network
Baarlamaanka Soomaaliya Oo Go,aan Gaar Ah Ka Gaadhay Dhaqaalaha Miisaaniyada Ugu Jira Ciidamad
Muqdisho(Saxilnews.com):-Guddida joogtada ah ee baarlamaanka dawlada federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaaciyey in la ansixiyey dhaqaalaha miisaaniyada qaranka ugu jira ciidamada kala duwan.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya Mahad Cadale Cawad oo shir jaraa,id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la sii daayey dhaqaalaha ciidamada kala duwan ugu jira miisaaniyada qaranka ee wali hor taala baarlamaanka.
Gudoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka ayaa sheegay in go,aanka lagu fasaxay miisaaniyada ciidamada kala duwan ay gaadheen guddida joogtada ah ee baarlamaanka oo ka kooban gudoomiyeyaasha iyo ku xigeenada 15-ka guddi hoosaad ee baarlamaanka iyo shir gudoonka golaha.
Sidoo kale waxa uu sheegay in sababta go,aankan loo gaadhay inay tahay sidii aanay ciidamada kala duwani u joojin lahayn shaqada ay u hayaan dawlada isla markaana ay lagama maarmaan noqotay in la sii daayo dhaqaalaha ay ku leeyihiin miisaaniyada qaranka.
Miisaaniyada dawlada federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wali hortaala baarlamaanka, iyada oo ay dood adagi ka taagan tahay sidii loo ansixin lahaa.
Dhinaca kale maalinta sabtida ah ee bilawga todobaadka soo socda ayey xildhibaanada baarlamaanku u balansan yihiin inay sii wadaan dooda ay ka leeyihiin miisaaniyada hortaala.